KAS Iyo KARAAN by Cabdiqaadir Dayib Askar (Paperback) - Lulu
By Cabdiqaadir Dayib Askar
Buuggan waxa uu weeleeyey sheekooyin-fanneed si farshaxanimo sarre leh u iftiiminaya wacyiga nololeed ee dhallinyaradda Soomaalida. Waxaanu xambaarsan yahay sheekooyin dareen- taabad leh, oo naftaada kaga tagaya fakar dheer iyo falsafado ugub ah. Waa muuqaalo xallad iyo xanuun badan oo ku suntan dhacdooyin maalinle ah oo ay aallaba dhagahaagu maqlaan ama dhaayahaagu arkaan. Dhab ahaantii ma aha is-moodsiis iyo is- yeel-yeel, waa se xus iyo xasuusin. Waa maskax-maalid, murti curin iyo maalin-qadin nafeed.
By Aanas mahdi aadan
Qorista buug la qoraa waa shay aad u sahlan, se waxa dhib badan inaad wax ka qori kartid qodob taabanaya duruufta bulshadadaa ku gadaaman, buuga kas iyo karaan waa mid koobsaday waxyaala badan oo bulshadu haraad badan u qabtay waliba bulshada qaybteeda nugul uguna tirabadan bulshada waa dhalin yaradee, runtii asker waxaad doortay mawduuc aad loogu baahnaa in lays dul taago oo wax badan bulshada looga iftiimiyo. ugu danbeyn amaan dhamnteed iyo hambalyaba waxa iska le qoraaga buuga oo wakhti badan galiyay si loo helo buugan qiimaha badan le,sdaas o kale waxan rajaynayaa inay akhristayaashu iyaguna wakhti badan galin doonaan akhriskiisa sida uu qoraaguba wakhiga badan u galiyay diyaarintiisa.
By Jibril Jirde
Buuggan KAS iyo KARAAN, waxa uu dhab u taabanayaa duruufaha nololeed ee la derisay bulshadeena gaar ahaan dhallinyarada. Waa buug ka digaya dhibta iyo dhaawaca ka soo gaadha dhallinyarada duruufaha ku hareersaysan ee ay la nool yihiin, kuna dhiirrigalinaya han sarreeya, himilo fog iyo in aanay is dhiibin ee ay yeeshaan dhabar adayg ay kaga gudbaan marxaladaha adag ee soo waajaha. Qoraagu waxa uu ku qoray buuggan luqad fudud, oo qof waliba fahmi karo. Iibso oo akhri, waa hubaal in aad dareemi doonto isbaddel weyn.
By Ibraahin Hawd
Ma jiro cod iyo cudud ka weyn, marka ay dhallinayaradu is-aaminto. Buuggan wuxuu marag cad u yahay in tabashada iyo dareenadda qarsoon ee dhallinyarada aanay jirin cid ka warbixin karta si dhammaystiran, oo aan ahayn dhallinyar. Buuggan waa mid shillis oo si aftahamo yaab badan loo hal-abuuray. Waxa uu ka bixinaya sawir dhab ah duruufaha kakan ee ay la nool yihiin dhallinyaradda Soomaalida,qaran-joog iyo qurbe-joogba. Farriintadu waxa ay tahay, iibso buuggan, dhuux nuxurka ku duugan, dabadeedna ka fal-celi.